Wellbeing Magazine dia manasongadina an'i Ken Kladouris
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Wellbeing Magazine dia manasongadina an'i Ken Kladouris
Oktobra 21, 2021
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Ken Kladouris dia nanambara ny fanombohana ny fandaharam-potoany nandrasana efa an-tserasera izay nampitondraina ny lohateny hoe “Milamina mankany amin'ny fahombiazana.”
Ny taranja dia natao hanolorana lesona andiam-pianarana kendrena hanampiana ny olona hirona ao anatiny mba hitrandrahana ny fahafahany feno.
Ilay mpandraharaha Ken Kladouris dia nisafidy ny hampivelatra ity tolotra ity rehefa nanambola nandritra ny taona maro tamin'ny fampivelarana ny tenany, nahafantatra ny fomba hanampiana ny lehilahy sy ny vehivavy hanandratra ny tenany, saina, vatana ary fanahy. Anisan'ny dian'i Ken ny fisintomana amin'ny fahanginana maharitra, miaraka amin'ny fihemorany fahatelo sy farany ary ny lesona nianarany nizara tamin'ny Wellbeing Magazine.
Ity fialan-tsasatra mangina fanao isan-taona ity dia niato tamin'ny hetsika ary manantena ny hampiantrano fialantsasatra mangina i Ken amin'ny taona ho avy miaraka amin'ireo nahazo diplaoma tamin'ny fandaharan'asany.
“Marina ny voalazan'izy ireo - lasa tsara kokoa ny dia mankany amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny fampiasam-bola tsirairay ao anatin'izany. Manantena ny hizara hevitra lalina kokoa momba ny fialan-tsasatra farany nataoko tamin'ny mpikambana ao amin'ny Stillness to Success aho. ”
Saint Lucia mankalaza ny fisokafan'ny Kanada ...
WestJet dia nanome anarana VP Executive vaovao sy Chief Loyalty...
Misaona ny fahaverezan'ny CEO Josefa Tuamoto ny fizahan-tany Solomonons
Lalao Sage Class vaovao azo alaina any amin'ny Black Desert...
Ny 60%-n'ny Amerikanina dia mety tsy handeha mandritra ny fialantsasatra
Fa maninona no Jamaika? Valiny ho an'i Etazonia “Aza ...
Nasaina hisoroka an'i Kabul ireo teratany anglisy sy amerikanina ...
Dimy taona tany am-ponja Alemana noho ny COVID-19 sandoka…
Misotroa divay bebe kokoa. Fanampiana hamboly toekarena manerantany
Sakafo vaovao amin'ny sidina Uganda Airlines: Grasshoppers?
Fitsarana Ambony any Amsterdam: Ny Scythian Gold dia an'ny...
Ny horohoron-tany mafy 7.1 tany Acapulco, Meksika dia sokajiana ho ...
Ny fampirantiana vaovao ao Beijing dia manambara ny sivilizasiona olombelona tany am-boalohany
US NAVY: Rano fisotro any Hawaii ho lasa voapoizina...
Ao anatin'ny lisitra malaza ianao: Nandrahona an'i Taiwan i Shina...
Nekena i Caldolor ho fanalana fanaintainana alohan'ny fandidiana
UNWTO Lalao Fanovana Fifidianana: Ahoana ny fandehany ankehitriny?
Tanànan'ny fivezivezena kintana dimy mora indrindra sy be indrindra eto Etazonia
Mahazo fampahalalana momba ny dia vaovao avy any Seychelles ny mpiara-miasa italiana
Manam-pahaizana momba ny diabeta ambony sy orinasa AI izay mankany Guam
Zava-misy mahavariana sy mahafinaritra momba an'i Karaiba
Nambara ny Fianarana Vaksiny Fitsaboana Kansera Vaovao any Sina
Fahadisoam-piaramanidina 10 mahazatra mandaniam-bola anao
Fametahana fatratra amin'ny ady amin'ny sakafo fisakafoanana mampidi-doza
Manokatra ny mpitsidika tsy misy ... i Thailand rehetra izao
Emirates dia manavao ny fanoloran-tenany amin'i Seychelles amin'ny Expo...
Nafindra toerana ny nosy Vulcano any Italia noho ny...
Ny trano fialan-tsasatra any Hawaii dia miakatra be ankehitriny
Miasa maimaimpoana ireo mpiasa Alitalia
22 ENY, 250 TSIA: Zurab Pololikashvili ho an'ny UNWTO...
Ny tale jeneralin'ny OMS dia niresaka tamin'ny G20 Health and Finance...
Seychelles fizahan-tany ao amin'ny Edisiona Vaovaon'ny Espaina amin'ny Seho Fitetezam-paritany Novambra 30, 2021
Ny fitazonana ny fahitana azy eo amin'ny tsenan'ny Espaniola, ny ekipan'ny Tourism Seychelles dia nanatrika ny seho fitsangatsanganana Dive 2021, izay natao ny 20 ka hatramin'ny 21 Novambra 2021 tany Madrid.
Ny mpamokatra tsara indrindra amin'ny fitaovana fandroana Novambra 30, 2021
Ny efitra fandroana dia iray amin'ireo toerana manan-danja indrindra amin'ny trano rehetra. Miala sasatra any ny ankamaroan'ny olona ary mahatsapa ho marefo. Izany no antony mahatonga ity toerana ity tsy maintsy mahazo aina, milamina ary stylish.
Ny zo sy adidin'ny ankizy iray ao amin'ny toby Novambra 30, 2021
Amin’ny maha-ray aman-dreny antsika dia manahy mandrakariva ny amin’ny fivoaran’ny zanatsika isika. Tianay foana ny hahita azy ireo hanana karazana zavatra tsara indrindra araka izay tratra. Na izany aza, tsy afaka mampianatra azy ireo izany rehetra izany ny sekoly. Misy fotoana izay ilain'ny zanatsika ny hiaina zavatra samirery sy hahatsapa ny fahafahany. Izany indrindra no antony nananganana ny Kids Camp.